Hiroso mankany amin'ny TNT dia ahoana? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ary araka ny fanazavana azoko dia toy izao izany rafitra izany :
1) Hoezahina havadika ho TNT avokoa izany fahitalavitra sy ny radio manerana ny nosy
2) Mety hisy ny fotoana, sady hampiasana ny rafitra analogique sy ny rafitra numérique
3) Hisokatra ny fahazoan-dalana amin’ny fanokafana télé vaovao indray
4) Ary afaka manolo-kevitra ny faritra ny amin’ny fanapariaham-baovao : eo anivon’ny faritra ihany ve sa manerana an’i Madagasikara ?
5) Ny fitaovana handraisana ny radio-télé moa dia hisy fiovana ihany koa na ho an’ny radio izany, na ho an’ny mpanjifa. Ho an’ny radio-télé dia mbola hiasa ny antenne hampiasain’ny DIT amin’izao ary ny adihevitra misokatra dia hoe havela halalaka ve sa mbola avela amin’ny fanjakana ny fitantanana ireo antenne marobe ireo ?
6) Ny amin’ny émetteur kosa indray dia hihena ny sarany saingy ny vola haloha amin’ny fanjakana no havesabesatra kokoa.
7) Ny momba ny asa fanaovan-gazety kosa indray, indrindra ho an’ny télé sy ny radio, dia hiova tanteraka mihitsy ny fomba fiasa ka toy ireny amin’ny canalsat ireny ny télé rehetra eran’ny nosy:
Hisy ny mpamokatra fandaharana fotsiny
Hisy ny mpandefa fandaharana
Ary hisy sarany ny fahafahana hijery ireo fahitalavitra ireo
Saika hivadika thématique koa ny canal amin’izany ary mety ho hankavitsiana ihany ny hijanona généraliste.
Ny télé sy ny radio, noho izany, amin’ny fandraisana ireo fandaharana vahiny rehetra dia handoa vola avokoa. Ho teren’ny zava-misy izy ireo amin’izany ka tsy maintsy hampandoa vola ny mpanjifa azy avokoa.
Ny mpanao gazety kosa dia mila miroso amin’ny famokarana tanteraka satria tsy fantatra na ho mpiasa raikitra izy ireo na ho mpamokatra fandaharana fotsiny ihany. Hila fitaovana harifomba izy ireo noho izany ka izay indrindra no mila jerena sy hangatahana « franchise » satria somary masiatsiaka ihany ny FMI ny amin’io franchise io. Mila manao action de plaidoyer noho izany mba hahafahana manao fividianana matériels avy any ivelany ary arifomba.
Ny ankoatr’izay :
Ny eo amin’ny lafiny ara-tsosialy kosa, dia hisy ihany koa, vokatr’io fiovana rafitra io, ny mety ho fanesorana ny mpanao gazety amin’ny asany, na koa ny fampitomboana ny isan’ny mpanao gazety arakaraka ny tolotra. Ny zavatra hisy fotsiny dia hisy aloha ny fikorontanana ao anatin’ny tontolon’ny asa, izay tokony hanaovana atrikasa manokana.
Eo ihany koa ny fitakiana fifehezana fiteny vahiny maro satria ny orinasa mpandefa fandaharana, raha hiatrika ny tsena, dia tsy maintsy hivarotra any ivelany.
Tokony hipetraka mazava tsara ihany koa ny fanomezana ny carte professionnelle (olona manao ahoana ? mahafehy ny tekinika fotsiny ve ? Sa mahay tournage-montage ihany koa ve ?)
Ary miainga avy aiza ny famaritana ireo rehetra ireo, ao anaty code de la communication ve sa ireo koa mbola hamaritra ny code de la communication ?